Sandals Resorts waxay welwelka ka qaaddaa qorshayaasha socdaalka ee dunida maanta
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Hotelada & Dalxiiska Wararka » Sandals Resorts waxay welwelka ka qaaddaa qorshayaasha socdaalka ee dunida maanta
Wararka Antigua & Barbuda • Bahamas News Breaking • Barbados News Breaking • Jebinta Wararka Caalamka • Caribbean • Curacao Breaking News • Wararka Grenada • Warshadaha Warshadaha • Hoteelada & Dalxiisyada • Jamaica News Breaking • Wararka Raaxada • News • Dib-u-dhiska • jiga • Wararka Saint Lucia • Dalxiiska • Qiimaha Safarka | Talooyinka Safarka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Wararka kala duwan
Ahh ... waa Goobaha Sandals -ka!
Dadka socotada ah ayaa xoogaa ku gaagaaban, oo diyaar u ah inay sameeyaan qorshahooda fasaxa, inkasta oo ay hadda dunida ka socoto. Nasiib wanaag, Sandals Resorts waxay leedahay hab ay ku samayso qorshayaashaas si kalsooni leh oo aan ka walwalin waxa dhici kara ama dhici kara mustaqbalka.
Martida Goobaha Dalxiiska ee Sandals waxay ka tagi karaan welwelkooda marka ay ballansanayaan fasaxyadooda oo ay ku riyoon karaan si weyn.
Goobaha Dalxiiska iyo Xeebaha Sandals, siyaasadda “Buugga Kalsoonida leh” wuxuu bixiyaa deggenaansho maskaxeed, wax kasta oo adduunka ka socda.
Xitaa ilaa maalinta bixitaanka, Sandals -ka si kalsooni leh ayay martidooda u daboolaan una ilaaliyaan.
Sandals -ka, martida waxaa lagu dhiirigelinayaa inay ku riyoodaan si weyn oo u qorsheeyaan fasaxooda mustaqbalka iyagoo leh kalsooni guud iyo cadaadiska yaraynta ballanqaadka. Buugga Sandals -ka ee leh siyaasadaha Kalsoonida ayaa u oggolaanaya martida inay helaan 100% lacag celin lacag caddaan ah haddii la baajiyo ka hor 31 maalmood ama ka badan ka hor bixitaanka.
Sidoo kale, waqti xaddidan, Martida kabaha waxay leeyihiin dabacsanaan ay ku baajiyaan safarkooda ilaa maalinta bixitaanka oo ay helaan ciqaabta baajinta dhulka ee lagu soo celiyo shahaadooyinka safarka Fasaxyada Gaarka ah.
Waa maxay Faa'iidada Ilaalinta Joojinta Fasaxyada Gaarka ah?
Faa'iidooyinka Ka-noqoshada Ka-noqoshada ee qaybta dhulka ee fasaxa waxay bixisaa 100% lacag celin haddii la joojiyo ugu yaraan 31 maalmood ama ka badan, ama la baajiyo ilaa maalinta bixitaanka, oo la helo shahaadada safarka ee safarka mustaqbalka, ee loogu talagalay ballansashada cusub ee hadda la sameeyay Ogosto 31, 2021. Gargaarkaan waxaa bixiya Fasaxyada Gaarka ah mana aha dheef Caymis.
Martida hadda ballansada illaa 31ka Ogosto, 2021, waxay leeyihiin faa'iidooyin dheeri ah oo ah ogaanshaha inay baajin karaan sabab kasta ha ahaatee marka laga reebo Taariikhaha Madow sida hoos lagu qeexay. Ma jiro dhererka ugu yar ee joogitaanka loo baahan yahay.
Goobaha Dalxiiska & Qeybaha Qolka
Taasi way fududahay in la qeexo, maxaa yeelay tani waxay daboolaysaa dhammaan Goobaha Sandals & Xeebaha. Marka la eego qeybaha qolka, kuwa badankood waa la daboolay marka laga reebo Bungalowyada Biyaha-dhaafka ah & Villa-biyo-dhaafka ee Sandals Royal Caribbean, Sandals South Coast, Sandals Grande St. Lucian.
Daaqad sii Qabashada
Oktoobar 6 - Ogosto 31, 2021*
Oktoobar 6 - Diisambar 31, 2022*
*Taariikhaha Madoowga Codso -
Diisambar 27, 2020 - Janaayo 3, 2021
Febraayo 13 - 19, 2021
Maarso 15 - Abriil 11, 2021
Nofeembar 20, 2021 - Nofeembar 26, 2021
Diisambar 18, 2021 - Diseembar 31, 2021
Febraayo 19, 2022 - Febraayo 25, 2022
Maarso 12, 2022 - Maarso 26, 2022
Abriil 10, 2022 - Abriil 24, 2022
Nofeembar 19, 2022 - Nofeembar 25, 2022
Diisambar 21, 2022 - Diseembar 31, 2022
Faahfaahin dheeraad ah ka hel halkan.